Sidee Gar Looga Dhigaa - Talooyinka Qurxinta ee Ragga Stylish | Ragga Stylish
Sidee loo xiiqaa gadhka
Garka hoos u dhig abuur qaab shaqeynaya taasina waxay tilmaamaysaa soo jiidashada wejiga ninka. Si aad u sameysid dariiqaas waa inaad isticmaashaa makiinad shaqeysa aalad mugga ka saar timaha si dabiici ah. Si aad tan u awoodo, waa inaad bedeshaa heerarka mashiinka waxaadna ubaahantahay sax oo waxaad ogaataa talaabooyinka qaarkood.
Sida caadiga ah, tobanaan sano ka hor gadhka ama waa laga dheeraaday ama waa laga saaray. Maanta waxaan horeyba uheli karnaa qaabab iyo goynno badan oo kugu martiqaadaya inaad sameysid jajab kaas oo hoos u dhigaya timaha garka. In badan oo ka mid ah waa wehliyaha fudud, oo sidoo kale loo yaqaan hadh leh ama libdhay.
1 Mashiinnada lagu xaalufiyo gadhka
2 Sidee loo xiiqaa gadhka
3 Samee saameynta wehliyaha
4 Daryeel ka dib sharaf dhac
Mashiinnada lagu xaalufiyo gadhka
Waxaa jira mashiinno muhiim u noqday daryeelka gadhka ninka. Ma jiraan makiinado si gaar ah loogu talagalay in lagu jaro ama lagu libiro, laakiin waxaa loogu talagalay in timaha la jaro iyo afeef wareegyada timaha, gadhka iyo dhinacyada.
Mashiinnada ku shaqeeya baytarigu waxay abuuraan madax-bannaanid badan, laakiin waqti ka dib waxay waayi karaan awooddooda. Ilaa hada, kuwa wali loo adeegsado fiilada ayaa lagula talinayaa, si aysan awoodooda u lumin oo ay u helaan dhameystir ka wanaagsan.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah mashiinnada aad ka heli karto khadka tooska ah ama si aad isugu barbar dhigto dukaamadaada caadiga ah. Waxaa jira sumadda Hysoki HK-701 ee loogu talagalay in madaxa la xiirto laakiin waxay u shaqeysaa sida ugu fiican gadhka nusqaameeya. Qiimaheedu ma gaarayo € 50. Nooc kale ayaa ah Wahl FAAHFAAHINTA T- WORD CORD oo leh qiimo ka sarreeya € 120, laakiin waxay gaaraysaa waxa la soo jeediyay in la helo, waa sababtaas tan ugu iibsiga badan Mareykanka. Mashiinka Wahl BERET Prolithium Mini Black waa mid aad wax ku ool ah, xadhig iyo ergonomic ah. Waxay gaaraysaa € 100 waana mid wax ku ool ah oo raaxo leh taas gradient kaamil ah
Khafiifinta garka oo ku dhowaad inuu noqdo mid cilladaysan ayaa ah farsamo Dhiman oo ah waxay u baahan tahay farsamo iyo samir. Ma ahan wax fudud oo fudud, laakiin waa inaan sidoo kale xoojinnaa dhammaan khadadkaas ama astaamahaas u muuqday xilligii bahdilka oo ay tahay in gebi ahaanba la baabi'iyo.
Haddii aad leedahay gadh dheer oo weynaaday waa inaad samee dhererkiisa dhererkiisa. Waxa ugu caansan waa in la sameeyo leh maqas oo gooyaa dhamaadka ilaa inta la gaadhayo dhererka la doonayo, laakiin gaaban ku filan si loo bilaabo isticmaalka mashiinka.
Waa inaad mashiinka u dejiso heerka ugu hooseeya oo aad bilowdo garka garkiisa jar. Waxaan ku bilaabaynaa salka lowska oo aan ka shaqeyno ilaa garka.
Waxaan sii wadnaa jarista gadhka oo ku hagaajinayna heerka 1 ama 2. Waa inaad ku hagaajisaa taabashadan wejigeeda soo socota adoo samaynaya xooji qaybaha dhabannada.
Dhabanka korkiisa waa inuu tagaa si buuxda loo xiiray, waa inaad baabi'isaa wixii qurux ah ee kuu muuqda. Waqtiga aad sameyneyso, ha diiradda saarin inaad ku sameyso xariiq toosan, hubi kaliya inaad ka saarto dhamaan quruxdaas quruxda ah ee aadan rabin inaad aragto.
Samee saameynta wehliyaha
Hadda waa waqtigii la samayn lahaa wadarta wadarta. Waxaan ku dhejineynaa mashiinkeena mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya iyo kan kara hal dhinac ka jar wajiga. Waa inaad sameysaa hoosta qoorta oo kor u kac, garka kor
Waa inaad ka sii socotaa garka oo aad raacdaa dhabanka Ilaa uu ka gaadhayo guriga macbudkiisa, meesha timuhu ku dhashaan. Aaggan waa inaad ku ciyaarto heerarka si aad u abuurto saameyn wanaagsan oo liidata.
Waxaa haray oo keliya in lagu celiyo dhinaca kale ee wejiga. Waa inaad ka bilowdaa qaybta hoose ee qoorta iyo si tartiib ah u fuula. Waxaan sii wadi doonnaa xaalufinta aagagga oo dhan illaa aan ka gaarno aagga gubashada.
Daryeel ka dib sharaf dhac
Haddii aad jeceshahay inaad ilaaliso khadka wejigiisa waa inaad garkaaga jar asbuuciiba mar. Codsiga alaabada si loo qoyo maqaarka ayaa lagugula talinayaa, waa inaad had iyo jeer ku sameysaa maqaarka xoogaa qoyan. Waxaan kugula talineynaa kareemka 'Eau Thermale de Avène' kadib marka la xiiro oo biyo siiya, ka hortaga bakteeriyada isla markaana leh filim ilaalin ah oo loogu talagalay daryeelka wajiga.
Kariim kale ayaa ah huurka leh Aloe Vera oo ka socda Nezeni Cosmetics. Isticmaala waxyaabo dabiici ah oo tayo sare leh waana wax lagu farxo. Waxay ka hortagtaa xasaasiyadda iyo xanaaqa waxayna ku habboon tahay maqaarka xasaasiga ah. Talo soo jeedin kale ayaa ah Aftershave Balm L´Eau D´Issei oo ka socota Issey Miyake, oo ah shirkad Japanese ah oo casri ah. Aad u jilicsan, fudeyd iyo kareemo intaas leh waxay cusbooneysiin doontaa oo nafaqeyn doontaa maqaarka.
Kala-qaadiddu waa farsamo gacan ka geysaneysa sidii loo gaari lahaa garka jarista iyo qurxinta leh. Waa qayb ka mid ah noqoshada casriga oo u baahan samir iyo dhaqdhaqaaq fiican ee gacantaada. Ha quusan haddii ay soo baxdo markii ugu horreysay, marwalba waad kori kartaa gadhkaaga markalena dib ayaad usii ceshan kartaa markii loo baahdo. Si aad wax badan uga ogaatid garka waad akhrin kartaa tilmaamaha ugu fiican ee daryeelkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee loo xiiqaa gadhka
Sidee lagu ogaadaa inaad jeceshahay naag
Cuntooyinka qaniga ah ee zinc